Ukwahluke phakathi kobhaka kunye ne-Baking Soda
Ukuphulwa kweMpawu zabo zoKhemikhali
Bobabini i-baking soda kunye ne-baking powder zi-agent ezigcobayo, oku kuthetha ukuba zongezwa kwizinto ezibhakabhaka ngaphambi kokupheka ukuze zivelise i-carbon dioxide kwaye zibangele ukuba ziphakame. I-powder yokubhaka iqukethe i-baking soda, kodwa ezo zinto zibini zisetyenziswe phantsi kweemeko ezahlukeneyo.
I-baking soda i-sodium bicarbonate ecocekileyo. Xa kubhaka i-soda kudibaniswa kunye nomswakama kunye nesithako esiyiphunga (umzekelo, i-yogurt, i-chocolate, i-buttermilk, nobusi), ukuphumela kwamakhemikhali okuvelisa ukuvelisa i-bubble carbon dioxide eyandisa phantsi kwamaqondo okushisa kwe-oven.
Impendulo iqala ngokukhawuleza ekuxubeni izithako, ngoko ke kufuneka upheke ama-recipe okubiza ukuba i-baking soda ngokukhawuleza, okanye mhlawumbi iya kulala!
I-powder yokubhaka iqukethe i-bicarbonate ye-sodium, kodwa ibandakanya i-agent agent esebenzayo ( ukhilimu we-tartar ), kunye ne-agent engomileyo (ngokuqhelekileyo isitashi). I powder yokubhaka ifumaneka njengompu wokubhaka owodwa kunye kunye nompu opheka kabini. Amaproders asebenzayo kuphela asebenze ngunyuma, ngoko ke kufuneka ubhakale iipespethi ezibandakanya le mveliso emva kokuxuba. Amaproders asebenza ngokuphindaphindiweyo athatha amacandelo amabini kwaye anokuma ixesha elithile ngaphambi kokubhaka. I-powder e-double-acting, enye igesi ikhutshwa kwiqondo lokushisa, xa i-powder yongezwa kwintlama, kodwa ininzi yegesi ikhutshwa emva kokushisa kwe-intlama.
Iindlela zokupheka zithatyathwa njani?
Ezinye iindlela zokupheka zibiza i-baking soda, ngelixa ezinye zibiza ukuba i-powder baking.
Sisiphi isithako esisetyenziswayo kuxhomekeke kwezinye izithako kwiresiphi. Injongo ephambili kukuba kuveliswe umkhiqizo ohlwayekayo ngokumnandi. I-baking soda iyisisiseko kwaye iya kuvelisa inambitheka enomzimba ngaphandle kokuba i-asidi yesinye isithako, njengobhotela. Uza kufumana i-baking soda kwiiresiphi ze-cookie.
I-powder yokubhaka iqukethe i-asidi kunye nesiseko kwaye inefuthe elipheleleyo lokungathathi hlangothi ngokubhekiselele kwintetho. Iidrafki ezibiza ngokuba yi-baking powder zihlala zibiza ezinye izithako ezizonambithekayo, ezifana nobisi. I-powder yokubhaka iyisithako esiqhelekileyo kwiinkwa kunye neebhisikidi.
Ukuhambisa kwi Recipes
Ungenza indawo ye- baking powder endaweni ye-baking soda (uzakufuna i-powder yokupheka ngaphezulu kwaye iyakuchaphazela inkcazo), kodwa awukwazi ukusebenzisa i-baking soda xa iresiphi ibita i-powder baking. I-baking soda ngokwayo ayinakho i-acidity yokwenza ikhekhe iphakame. Nangona kunjalo, unokwenza ipowder yakho yokubhaka ukuba unayo i-baking soda kunye ne-cream ye-tartar. Hlanganisa nje iincinci ezimbini ze-tartar kunye nesahluko esinye se-baking soda.
5 i-Simple Buttermilk Substitutes
Izixhobo eziqhelekileyo zokuSebenza
Indlela Yokwenza Ubunjani Ubunzima
I-Baking Soda isebenza njani
Ubomi Bokubeka Ubunzima beShelf
I-Microwave Radiation Definition
Ukubala okungafaniyo kunye nokuHlonipha
Indlela yokuqulunqa imiyalelo yeMichiza yokuSebenzisa i-Kinetics
Kutheni Unako Ukusela Iviniga Kodwa kunjalo ayikho I-Sulfuric Acid
I-Albhamu ebalulekileyo ye-Grindcore
URichard the Lionheart
I-Major League Darts - I-Greatest Tournaments kuMdlalo
Ubude bombuso wasePersi
Ukusebenzisa 'i-Sentir' kunye 'ne-Sentirse'
Funda iJapan Word En
"Imimoya" -Ifayile yeSishwankathelo soMthetho omnye
Indlela yokubopha umzobo-8 Ukulandela i-Knot
Iingcali ngeZikolo eziPhakamileyo zase-Intanethi
Mano Sinistra kwi-Piano Music Notation
Iilwimi eziNcedisayo: Igrama yoLwimi lwesiGrike kunye neNkcazelo yegama lesiGama
Iimpi zeNapoleonic: uMarshal Michel Ney
Ubani Ubhaptizo lweNkosi?